Apple TV + inobata kodzero dzemufirimu Iyo Macbeth Dambudziko naDenzel Washington | Ndinobva mac
Apple TV + yatora kodzero kune inotevera Njodzi yaMacbeth, firimu rekutanga rakanyorwa uye rinotungamirwa naJoel Coen pasina mukoma wake uye mudiwa wefirimu Ethan Coen. Iyo bhaisikopo Ichaburitswa kutanga mumitambo kutenderera pasirese panguva yechina yechina ya2021, isati yafungidzirwa pasirese paApple TV +.
Sekureva kwekupedzisira, iyo firimu inoonekwa seyakakurumbira chirongwa uye a mubairo mwaka unokwikwidza. Ino nyeredzi Frances McDormand naDenzel Washington, vakundi vazhinji veOscar, uye Coen iye ane mana maAward Awards. Nebhokisi rakadaro, zvishoma kwazvo zvinogona kukanganisika.
McDormand anoridza Lady Macbeth uye Washington inoridza Lord Macbeth, mune yakatemwa vhezheni yaWilliam Shakespeare yekutamba. Iyi firimu yakapfurwa mutema nemachena. Coen akasarudzawo dzivisa chero mafirimu ekunze, achisarudza iyo yaanodaidza kuti "isiri yechokwadi" yezviridzwa.
Vamwe vese vakasara vanoumbwa naBertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Kathryn Hunter, Harry Melling naBrendan Gleeson. Iyo cinematographer, Bruno Delbonnel, vagadziri vekupfeka, Mary Zophres, uye munyori, Carter Burwell, ndivo vekare vaizivana naCoen.
Chibvumirano ichi chinova chinonakidza zita remwaka unotevera unosanganisira iyo firimu CODA, inotungamirwa naSian Heder, uyo akahwina 4 mibairo pamutambo weSundance, kusanganisira Mubayiro weVateereri uye iyo Grand Jury Prize.
KuCODA, tinofanirwa kuwedzera Finch, nyeredzi Tom Hanks, firimu yesainzi yekunyepedzera kubva kuAmblin Entertainment inotungamirwa naMiguel Sapochnik, iyo firimu inotarisirwa kuratidzwa paApple TV + gare gare gore rino.
Tanto CODA Chemhondoro Finch uye Nhamo ye Macbeth ari matatu anonakidza Apple kubhejera kwe kuti uve unokodzera iwo maAcademy Awards.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple TV + inochengetedza kodzero dzemufirimu Iyo Macbeth Dambudziko naDenzel Washington